Spiderman Homecoming Shooting | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » Spiderman Homecoming Shooting	10
Spider-Man ဇာတ်ကားအသစ်ဖြစ်တဲ့ Spider-Man Homecoming ကို Atlanta မှာ ရိုက်ကူးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိထွက်လာတဲ့ ရိုက်ကွင်းက ဓာတ်ပုံတွေမှာ Peter Parker အဖြစ် သရုပ်ဆောင်မယ့် မင်းသား Tom Holland ကို Midtown School of Science and Technology ရှပ်အိကျီ င်္ နဲ့ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ထပ် သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ Tony Revolori နဲ့ Zendaya တို့ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
kai says: Zendaya Maree Stoermer Coleman (born September 1, 1996), known simply as Zendaya, is an American actress, singer and dancer. As of 2013 she stars on ..
အသက်၂၀.။ ထင်တောင်မထင်ရ..။ အဆိုတော်ကနေ.မင်းသမီးတက်လုပ်တာပေါ့..။
အောင် မိုးသူ says: ချစ်စရာလေးနော်
လုံမလေးမွန်မွန် says: မင်းသားလေးက ချောလက်ထှာ
ခင်ဇော် says: ချစ်စာလေးဒွေ။
Thint Aye Yeik says: အိုက်မင်းသားက
ဘာလို့ ကျုပ်နဲ့ တူနေရသတုန်း
ခင်ဇော် says: အို ဘယ်နဲ့
ဆက်ဆက် မောင်လေး လာလာ
ဆေးသောက်ဖို့ မေ့နေတာ နာ့ မောင်လေးက။
Thint Aye Yeik says: ငင်! သူဗဲ
”နာ့မောင်လေးဂ ဆေးမတိုးတော့ဘူး။ နာ့လိုပဲ”ဆိုပြီး လွှတ်ထားပြီးတော့မျန်း
အဟီးဟီး နာ က တစ်မူးသာနေပေါ့နော်။
အောင် မိုးသူ says: နီက ဆေးမမီတာထက် ဆိုးသွားဘီ
ဂျစ်စူ says: ကျိချင်တယ် ကျိချင်တယ်